IBSA GADDAA ABO: Jaal Dheengee Huseen Kulaa, Miseensa Koree Hojii Gaggeesituu ABO – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIBSA GADDAA ABO: Jaal Dheengee Huseen Kulaa, Miseensa Koree Hojii Gaggeesituu ABO
Jaal Dheengee Huseen Kulaa, Miseensa Koree Hojii Gaggeesituu ABO akka tasaatti du’aan of biraa dhabuun gudda guddaan nutti dhagahamuu ibsina. Jaal Dheengeen Jimaata barii gaafa Waxabajjii 25, 2021 Hospotala Nairobii, Kenyatti guyyoota 11f bakka itti wal’aanamaa turetti boqote.
Jaal Dhhengee Huseen Kibba Oromia, Magaalaa Moyyaaleetti, Caamsaa 21 bara 1974tti dhalatee guddate. Barnoota isaa sadarkaa duraa fi lammaffaas Mana Barnootaa Moyyaaleetti xumure. Hiriyootni waliin guddata nii fi baratan yammuu himan ijoollummaatti callisaa barnoota isaa irraa hin gorree fi qaroo, bartoota
qorumsa biyyoolessaa ministeera barnootaa irraa bara san kennametti warra sadarkaa tokkofaatti qabxii guddaa galmeessan keessaa tokko ture.
Jaal’ataa fi taphataa kubbaa miillas ture. Carraa argame maraan baratee dandeettii isaa ol kaasuuf hawwii qab uun koorsiilee ogummaa gara garaa fudhateera. Universitii Afiriikaa Kibbaatti barnoota Siyaasaan digrii isaa duraa argate. Warri isaa ijoolummaatti akka fudhu waan godhaniif ilmaan Afur qaba. Obaleewan lubbuun jiran dhiiraa afurii fi dubartoota sadii qaba. Haadhaa fi abbaan duraa du’aniiru. Hojjataa fi tattaafataa waa maraa waan tureef ijoollummaan gaafatamni itti kennamee hawwaasaaf tajaajila kennaa ture.
Jaal Dheengeen bara 1990 Adda Bilisummaa Oromootti makame. Jaallan Zooni Kibbaatti makamee warren dirree sana banan keessaas tokko. Barattiin sun yeroo hadhooftuu fi qorumsaa turte.
Jaal Dheengeen warra humnicha jiraachisanii fi obsaa fi murannoon, naamusaa fi danboobaan humnichaaf fa kkii gaarii tahan keessaa tokko ture. Loltummaa fi dabballummaan qooda dinqisiisaa kennaa ture. Bara 1998 keessa miseensa Gumii Sabaa ABO tahee filame, Amanamummaa kaayyoo fi si’aa’ina hojii agarsiiseen kabajaa fi jaalala waan horateef 2017 keessa Kora Sabaa 4ffaa irratti miseensummaa Koree Hojii Geggeesituu ABOtti filamee hanga guyyaa boqotuutti kenninsaa fi murannoo cimaan qooda isaa kenneera. Gaafatamaa Hojii Hariiroo Alaa ABO kan Afiriikaa ture. Akka dafee ka’u abdachuun dhukkubsachuun isaahuu dhoksaatti qabamee ture. Wanti hin eegamin yammuu mudate gadda guddaatu nu hundatti dhagahame.
Du’aan adduunyaa kana irraa godaanuun battala dhagahametti oduun isaa dafee bakkayyuu gahe. Miseensota ABO duwwaa utuu hin tahin firaa-fiixaa fi sabboonttonni Oromoo hundi gaddaanii jiru.
Bakka aantii fi sabboontonni Oromoo heddumminaan argamanitti, aradduma itti dhalate Moyyaalee Oromiya atti sirna bareedaan ganama Waxabajjii 27,2021 hawwaalameera.
Yeroo ammaa kan hoogganootni ABO hed duun hidhamanii bakka isaaniis cufuuf kanneen hafan horiyaa yeroo jiran kana keessatti Jaal Dheengee Husee n of biraa dhabuun baay’ee gaddisiisaa tahus,warri hafe qabsoo inni guyyaa fi halkan itti hojoomaa ture fiixa baasuuf gahee ofii bahuun dirqama.
Jaallan qabsoo, Ijoolleen Jaal Dheengee Huseen, obbolaan ,firaa fi lammiin Oromoo marti obsaa, sabbaraa. W aaqayyo hunda keenyaaf jajjabina kenninna.Lubbuun isaa jannataan haa qananiitu.
Injifatnoo ummata Oromoof!!
Seenaa Jireennaa Gabaabaa Jaal Dheengee Huseen (1960-2021)
Jaal Dheengee Huseen Kuulaa bara 1960 keessa Oromiyaa kibbaa Konyaa Booranaa dheeda Mataa Wayaamaa aanaa Mooyyalee ganda Gooroo Sattawaatti haadha isaanii haatoo Diimaa Kottombola Garsee fi Abbaa isaanii aabba Huseen Kuulaa Waaqoo irraa dhalatan. Jaal Dheengee Huseen akkuma guddattee ergaa guutee, nama yarsumaa tayeen carraa barannoota baraa argatee barumsaa jalqabe. Barumsa sadarkaa qaraa Mooyyaleetti, sadarkaa 2ffaa Yaaballootti xummuruun Baalee Gobbaatti Kolleejjii Argaffaa irraa eebbiffaman. Warranii haadha mana horatan. Jiruu isaanii geggeeffachaa osoo jiranuu Jaal Dheengee bara 1990 keessa qabsoo Addaa Bilisummaa Oromootti makaman.
Jaal Dheengee ijaarsa maandheetii haga bara 1991 wajiira ABO Mooyyaleetti bananiitti qabsa’aa Oromoo Jaal Badhaanee Gaashuu fa’a waliin ijaarsa cimaa geggeessaa turan. Bara 1992-3 naanoo Nageellee Booranaa, Baaleefi Gujiitti ijaarsa jaarmayaa cimaa addaa bilisummaa Oromoo geggeessaa turan.
Bara 1993/4 Dirree qabsoo kibbaa Soloolootti Jajjabee WBO waliin Qabsoo Oromoo walaboomsuu itti fufan. Achuma keessaatti koree ol aanoo WBO zoonii kibbaa keessa galan. Bara 1996-7 damee siyaasaa WBO naannoo Mooyyaleefi Saakuu adda durimmaan geggeessaa turan. Hoggantoota ABO kanneen akka jaal Daawud Ibsaa, jaal Galaasaa Dilboo, jaal Abdii Raggasaa fa’a walii n waan guddoo hojjachaa turan. Bara 1998 kora ariifachiisaa ABOn yaameen miseensa Gumii Saba ta’uun muudaman. Baroota 1999-2001 meeshaalee waraanaa biyyoota ollaa akka Eertiraa irraa WBOf galchuun biyya Keeniyaa keessa qaxxaamursanii WBO dirree Oromiyaa jiruun gahuun hojii boonsaa hojjachaa turan. Bara 2004 siyaasaa ABO gama alaa geggeessaa biyya Afrikaa kibbaa gahan. Yeroo kanas qabsoo Oromoofi hawaasa Oromoo achi jiran wal barsiisuun gahee guddaa bahaa turan.
Malaaf maraa Hawaasa Oromoo, waa’ee qabsoo Oromoo irratti geggeessitoota biyya Afrikaa kibbaa waliin walitti dhiyeennan hojjachaa turan. Biyya Afrikaa kibbaatti jaal Dheengeen carraa barannootaas argachuun qabsoon cinaatti Diplooma 3fi digirii lama ( BA in Development Studies and BA in PEACE AND CONFLICT Studies) oo fudhatan dhiyeenna kana MA isaanii Project Management UNISA irraa xummuranii turan.
Bara 2016/17 kora saba Adda Bilisummaa Oromoo Eertiraatti taayeen Miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo (koree hojii raawwachiiftuu ABO) ta’uun muudaman. Bara 2018 ergaa Qabsoon ummanni Oromoo walii galaan godheen YADIG kuftee booda hogganoota ABO ol aanoo waliin biyyatti galan. Simannaa ABO kibba Oromiyaatti geggeeffameen dursuun Jeneraala Xulaa Duubee fa’aafi jaallan isaa waliin dammaqinaan ummata waliin hojjachaa turan. Bara 2019/20 ergaa haalli jiru jijjiiramee, walii galamuun dhibee dhiibbaan cimaan gama paartii biyya bulchuutin ABO irratti geggeeffamtee booda, qabsoo Oromoo utubuuf jecha hoggansa ABO gama alaa ta’uun biyya Keeniyaatti ramadan. Achuma taa’anii hojii qabsoo sabaa geggeessaa osoo jiranuu dhibeen kun isaan qabate. Dhibee tasa isaan qabate, biyya Keeniyaa magaalaa Naayirobii hospitaala Keeninyaataaaatti wal’anaamaa osoo jiranuu Wax 25,2021 barraaqa lubbuun isaanii dabre. Jaal Dheengee Huseen Abbaa Jjoollee 3 yoo ta’an sadanuu dhiira. Guyyaa hardhaa Wax 27,2021 ardaa Dhaloota isaa magaalaa Mooyyaleetti sirni awwaalcha isaa geggeeffame.
Madhaa maatiin, firaa fiixaan, Booranaafi Oromoon martuu, jaallan Qabsoo fulaa akka akkaa jirtaniifi jaalaattootaafi mararfattoonni isaa martuu jajjabaadhaa! Irraa hafaa! Lubbuun dhaloota hin oolin silaa du’a hin ooltu. Seenaan isaa tarree gootota Oromoo keessa galeera! Biyyeen siif ha sablattu!
May your soul rest in peace! “
Tigray: Ethiopian government’s new narrative